Umkhosi Ukuvikelwa - usuku eyinhloko ikhalenda Orthodox
Ukuzalwa iliphi iholide landulelwa iyiphi senzakalo esingokomlando noma basezinganekwaneni abalulekile. Umlando we intercession iholide laseTheotokos iminyaka engaphezu kwekhulu, kusekelwe kweConstantinople ngo izizwe ezingamaqaba phakathi nekhulu leshumi leminyaka. Abantu abakhuluphele avinjezelwe isikhathi sasivumela eside, kungase kuphela abathandazayo baphephele ngamandla kaNkulunkulu. imithandazo engapheli benziwa abadumile esontweni Blachernae enesigqebhezana isembatho yibhande UnguNina KaNkulunkulu. Inganekwane ethile ithi ngobusuku obubodwa ukuba ezakhiweni yompristi ethempelini futhi umfundi wakhe, zabona wazibonakalisa ngokuyisimangaliso the Virgin, já abantu ngamgcina isimbombozo obungantengantengi ezimhlophe, okuyinto eyaba, njengoba they kholwa uphawu wokutakula okusheshayo edolobheni kubahlaseli. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa ama-namaqaba ngempela besaba washiya umuzi ngaphandle kwesizathu. Lo mcimbi sihlehlela emuva onyakeni 930 kukaJesu.
ERussia, incazelo eyisisekelo yegama "Ukuvikelwa UnguNina KaNkulunkulu," umqondo, liye landiswa kakhulu. Libhekisela indawo yokukhulekela ka 'indlovukazi yamazulu'. I iholide ngokwayo lugujwe intercession Orthodox wezwe lakithi kusukela ngekhulu le-12. Izazi-mlando eziningi zivame ukuba bakholelwe ukuthi owokuqala intercession Isonto waba lesikhumbuzo bokwakha Russian lasendulo - eyaziwa ngalezo zinsuku, Bandla intercession phezu Nerl.
Cover usuku kuyaqapheleka njengoba iholidi hhayi kuphela phakathi Orthodox. AmaKristu Western kanye namaGreki ohlonishwayo Virgin njengoba umvikeli wakhe kanye nomvikeli. Common wonke amaKristu, lokho okushiwo iSikhumbuzo iholide - into Virgin onesihe ukuze kuvikeleke abantu kuleli, angichithanga lubonakaliswa kahle ezihlukahlukene izimpawu. AmaKatolika kuyinto nejazi iNdlovukazi yezulu, amaGreki - Skepe (yokukhosela, ukuvikelwa), iSonto Lobu-Orthodox - Cover.
ERussia, njalo Our Lady ingeyamakhosi abangcwele ohlonishwayo kakhulu, futhi we nokuVikelwa holidi lenziwa ngomunye wabokuqala-throned sigubhe yonke indawo. Cossacks athunyelwa empini, ethwele phambi isithonjana UnguNina KaNkulunkulu, ibandla lika-amasonto emadolobheni athandaze eNcasakazini uMariya impilo nokuvikeleka yabathandekayo babo. Kwakucatshangwa ukuthi isikhathi eside umlamuleli ongcwele wasiza Russian amasosha ukunqoba ebaluleke sokuthuthukiswa izimpi wezwe.
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-800 ukugubha Virgin oNgcwele ingenye amaholidi eziphawuleka kakhulu Russian, njengoba kufakazelwa inombolo enkulu yezwe intercession Church. Phela, izibongo ezivamile phakathi Russian labantu "Pokrovsky" has kwaqala Maphakathi nekhulu le-19, lapho engcono abathweswe iziqu ezikoleni zenkolo banikwa amagama ngokuvumelana Orthodox amaholide enkulu.
Ukuvikelwa holidi uwela minyaka yonke ngomhla ka-14 Okthoba. Ngokusho kwabantu ubudala sika ukuthatha ngalolu suku iqhwa lokuqala kulobu busika. Ezinsukwini lasendulo Cover intombazane ukufunda umthandazo sizoshada maduze, ngoba kwakucatshangwa ukuthi iqhwa ayezinike Umama waseZulwini, ukuvikela umhlaba, futhi kuyisandulela izinguquko ezisheshayo. Nge ukugujwa Ukuvikelwa kosuku ezihlobene lenqwaba zokubhula ukuthatha. Ngokwesibonelo, ukukubona Indwangu Cranes kubonakala - ukuze obude ebusika abandayo, lapho ngo-October 14, yonke imithi baphonse amahlamvu, ebusika kuyoba efudumele, kungenjalo - libalele futhi nesithwathwa.
Namuhla umkhosi Ukuvikelwa, kanye eminyakeni lengemashumi lasihlanu leyengca, lihlonishwa Orthodox emhlabeni wonke. Emazweni amaningi, amasonto njalo inkonzo ezisobala iculo kwenziwa ngalolu suku. Ukuvikela Veil ka UnguNina KaNkulunkulu anikezelwe ukwakhiwa amasonto amaningi ezweni lakithi, phakathi kwabo: St Vasiliya Blazhennogo e Moscow, isembozo laseTheotokos ngo Bogorodsk (Nizhny Novgorod esifundeni), Bandla lokulabhela UnguNina KaNkulunkulu e Saratov, edolobhaneni Red , njll
Imikhosi ezibaluleke kakhulu eFrance: uhlu nezithombe
Kungani Easter Bhaka amakhekhe amaqanda zaveza?
Ngiyanihalalisela 60 iminyaka engu-owesifazane
Amahlaya Unforgettable lokuzalwa
Lapho sigubha International Literacy Day?
Isiqu yokwelapha cell: izici futhi ukusebenza
Grill "Intulo" (intulo): Izibuyekezo ikhasimende
Indlela ukulinganisa izinga lokushisa olusana? Sifunda!
"Megaphone" e China (kuzula). "Megaphone" e China: Izici umsebenzi amazinga, izibuyekezo
Ukuphuka kwe-collarbone enganekuzalwa. Ukulimala kokuzalwa kwezinsana
Isifingqo "Anna Karenina"
Ingabe kukhona Greenfield - emathuneni elite-New York City
Indlela ukuhlanza laptop yakho siqu
Uhlelo lwe-Adobe Premiere Pro: Izidingo zesistimu